Inkxaso yokurekhodwa kwevidiyo ye-960 fps ifika kwiRealme 3 Pro | I-Androidsis
Uhlaziyo lokuqala lweRealme 3 Pro luzisa inkxaso yokurekhoda ividiyo eshukumayo ehamba kancinci kwii-fps ezingama-960
El Realme 3 Pro ufumana uhlaziyo lwakho lokuqala, ezisa inqaku elitsha kwinkqubo yekhamera. Ifowuni, eyaqala ukubakho ngo-Epreli 29, ifumana iphakheji yayo yokuqala ye-firmware nge-OTA.
Inguqulelo entsha ye-firmware yona iyongeza Inkxaso yokurekhoda ividiyo ecothayo kakhulu kwizakhelo ezingama-960 ngomzuzwana.
Uhlaziyo lwe-OTA luzisa umsebenzi wokurekhodisha oshukumayo ohamba kancinci kwifowuni, njengoko besitshilo. Xa isixhobo sasungulwa, I-Realme ityhile ukuba inqaku liya kufumaneka ngale nto kwaye ngoku igcinwe ikho. Akukho lwazi kubude beevidiyo ezinokurekhodwa kule ndlela.
Uhlaziyo, olunobunzima be-182 MB, ikwaphucula uzinzo lwekhamera kunye nokucaca kunye nomgangatho weevidiyo. Ngaphandle kohlaziyo lwekhamera, azikho ezinye izinto ezintsha. Ayisihlaziyi isiqwenga sokhuseleko sango-Epreli.
Khumbula ukuba iRealme 3 Pro inesikrini Umbethe I-intshi ye-6.3 isisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080 kunye nokukhuselwa kweGorilla Glass 5. Inikwe amandla yiprosesa ye-Snapdragon 710.
Ngasemva kukho ikhamera ye-519 MP ye-Sony IMX16 ngekhamera ene-f / 1.7, edityaniswe nekhamera yesibini ye-5 MP yeziphumo ezibi. Inkqubo yekhamera inezinto ezininzi, njengemo yeNightscape, imo ye-Ultra HD, iChroma Boost, imowudi yeParrait, kunye nemowudi yengcali. Inokurekhoda i4K kunye nevidiyo ephelelwe lixesha kwaye ine-EIS. Inotshi kwiscreen likhaya lenzwa ye-25 MP ngenkxaso yokuvula ubuso.
Ifowuni inebhetri yamandla angama-4045 mAh ene-VOOC 3.0 ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwaye iyasebenza ColorOS 6 esekwe I-Android 9 Pie. Iyafumaneka kwi-Lightning Purple, Nitro Blue, kunye neCarbon Grey.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uhlaziyo lokuqala lweRealme 3 Pro luzisa inkxaso yokurekhoda ividiyo eshukumayo ehamba kancinci kwii-fps ezingama-960
I-beta entsha ye-OnePlus 5, 5T, 6 kunye ne-6T yongeza isilumkiso esitshisayo
I-Oppo Reno 5G yi-smartphone yokuqala ye-5G yaseYurophu ekhoyo